Saamaynta isbedelka ArcMap illaa ArcGIS Pro - Geofumed
Nofeembar, 2018 ArcGIS-ESRI, aragti ugu horeysay
Marka la barbardhigo qoraallada ArcMap Legacy, ArcGIS Pro waa codsi intaa ka badan oo dhexdhexaad ah, fududeynaya hababka, aragtida, iyo habka loo isticmaalo iyada oo loo marayo interface iyada u gaar ah; waxaad dooran kartaa mawduuc, qaabdhismeedka moduleka, balaarinta, waana inaanad ka walwalaynin in la joojiyo horay marka uu jiro casriyeyn cusub.
Maxaa kale oo aan ka filan karnaa ArcGIS Pro?
Marka hore, dhismaheeda ku salaysan 64, waxaa ka mid ah codsiyada sida ArcCatalog, ArcGlobe o Arcscene, oo kuu oggolaanaya inaad si marxalad leh u eegto aragtiyada 2D iyo 3D, waxaad ku kaydin kartaa hal mashruuc.aprx Khariidado badan, qaabab, muuqaalo, sanduuqyada iyo qaababka.
Heerka wax-qabadka, waxaad marin kartaa dhowr marxaladood, isla mar ahaantaana isticmaali kartaa shaqooyinka u sahlaya noloshaada, si kastaba ha ahaatee, qalabka 928. ArcMap, Laga soo bilaabo taariikhda dhismaha qodobkan, 723 oo kaliya ayaa laga helaa Pro. Waxaa la filayaa in qaybta ugu dambeysa ee 2018 oo dhan lagu dari doono, oo ay ku jiraan Parcel Fabric oo hadda loo yaqaan Diiwaanka Dhulkas
Xawaaraha dhaqdhaqaaqa u dhexeeya ra'yiga waa mid deg deg ah oo firfircoon, taas oo ah gargaar. Haddii aan dib u laabano oo xasuusno sida ay u shaqeyso ArcMap, waa inaan isticmaalnaa badhanka saxda ah iyo sifooyinka muraayadaha xogta la soo bandhigay, waa lakabka vector, raster iwm marka loo eego arinta ArcGIS Pro, hababka sida: qorista, ama calaamadaha waa sahlan, iyadoo loo marayo liiska style qoofalan o cajalad, taas oo ah mid saaxiibtinimo, habka caadiga ah iyo si habboon: qaabka aynu mar hore u caanbaxay isticmaalayaasha AutoCAD ama Microsoft Office.
ArcGIS Pro waxay leedahay sifooyinka aad maskaxda ku hayso:
Si loo helo ruqsadaha isticmaalka Pro, waa in aan ka diiwaan gashannaa urur, kaas oo noo ogolaanaya in aan xiriir dhow la leenahay isticmaalaha. Noocyada liisanka ayaa la mid ah kuwa laga helo ArcMap, Heerka, Heerka iyo Heerka Sare. GIS Tani waxaa loo isticmaali karaa labada si online, ku xiran network ka mid ah urur, ama sidoo kale waxaad ka shaqayn kartaa si offline, sida by goynta liisanka, ama haddii aadan haysan internet-ka ayaa sidoo kale shatiga kartaa ArcGis aad Pro, oo aan carqalad kasta oo aad.
Markaad bilawdid waxaad arki kartaa guddi-kicinta ArcCatalog, halkaas oo aad ka heli karto liiska goobaha aad isticmaaleysey. Khariidadaha waxaad arki kartaa dhammaan fikradaha aad ku leedahay gudaha mashruuca, sanduuqa qalabka ama sanduuqa qalabka waxaad arki doontaa shaqooyinka aan u adeegsanay in aan abuurno khariidada Hababka dhammaan muuqaalada iyo sabbabixiyadu waxay ku yaaliin, inta badan khariidadaha 3D ee ka mid ah 2D, ee Macluumaadka Goobaha aan abuurnay ee aan abuurnay ayaa ku yaal, ama ku dar wixii loo baahan yahay mashruuceenna.
Gudigaan waxaan sidoo kale heysanaa, nuqulayaal miisaska, geocoding, isku xirnaanta noocyada kala duwan ee serverka iwm. Waa maxay faa'iidada tan? Taas marka furitaanka mashruuca .aprx Waxaad kaydisay dhamaan xogta, waxaad mashruuc ka furan kartaa kombiyuutar kasta oo aad uga mahadnaqday qaababka liisanka, arrin aan ku dhicin .mxd sii joogi on mashiinka hal iyo waxaa ka aad trabajarlos.En eego calaamad, waxaad ka arki kartaa waxyaalaha la mid ah laga helay ArcMap haddii laga reebo waa: abuuro maps kulaylka, doorashooyinkan waa super dhakhso ah oo aanu u baahan ordi qalab kasta in ay curiyaan macluumaadka.
Mid ka mid ah waxyaalihii kale weyn waa inaanad u baahnayn inaad mariso ama joojiso dib-u-habaynta mar kasta oo aad isbedel sameyso, kaas oo looga baahan yahay in lagu sameeyo Arcmap,
Guddi mawduuc ah, meesha lakabyada lagu arkay, waxay ku darsameen codsi cusub ama qaabeyn ah jaantusyada, kuwaas oo kaa caawin doona marka aad soo saari karto falanqaynta lagama maarmaanka ah, laakiin, haddii aad rabto waxyaabo badan oo muuqaal ah, sida in lagu soo bandhigo waxaad isticmaali kartaa aaladda muusikada.
Iyada oo ku xiran lakabka la xushay, waxay u fureysaa dhowr tabs oo ku yaal saliideedka meesha aad ka heli karto fursadaha kala duwan. Laga soo bilaabo muuqaalka, calaamadeynta iyo hawlaha kale sida mid ka mid ah waxaan ka helnay kordhin sida Xtools Pro.
Wuxuu isku xiraa shaqooyinka horumarineed sawir, Waxaad ku xidhan karto server xor iyo sawirrada aad, ama isticmaal mid ka mid ah in aad horey u soo bixi, waxaad fursad u haysataa abuuro wax soo saarka qiimo-daray in click ah, sida ortorectificaciones, daruuraha dhibic, NDVI, khariidado kulaylka, ratings iwm, iyo haddii ma aad rabto ha ka shaqeynayaan kasta, adigaa iska yeesho oo iyaga waxaa la isticmaala kale la wadaagin, waa wax in uu isticmaalaa Qgis tusaale ahaan, halkaas oo aad ka qaadi karaan dar-ons (plugins) ama rakibi mid ka mid ah uu abuuray saaxiib kale.
Wixii geologists, geophysicists iyo kuwa kale geoscientists, ArcGis Pro isku xiro a Geosoft add-on in aad samayn kartaa geedi socodka sida, qaabab kala duwan .grd ESRI for falanqaynta, rasters dejinta aan xogta juqraafi (georeferenced) ka bixiyo dusha sare iyo u muujiyaan on meesha aad ku sugan codsan 3D symbologies ama palettes midabka caadiga ah ee wax soo saarka aad, ka mid ah qaababka kale oo ka caawin doona. Ha iloobin in aad u soo dejisan sababtoo ah waa lacag la'aan; https://www.geosoft.com/products/add-in-for-arcgis-pro
Wakhti fiican oo GIS ah waa qaab-is-dhexgalka Websaydh, isku xirka ArcGIS Online, Kuwaasoo aad kuu ogolaanayaa: daabacaan aad maps, hawlaha, ama arrimo geoprocessing iyo kuwa kale oo dib u, u hesho credit in uu kaydiyo xogta, helitaanka codsiyada kale content premium, download iyo isticmaalka ka browser iyo / ama qalabka mobile, iyo kuwo kale.
Marka aad dhameyso mashaariicdaada waxaad abuuri kartaa xirmooyin mashruuc ama Mashruuca baakadka, xubnaha kale ee ururka, aad u cusbooneysiin karaa inta jeer ee loo baahan yahay, tan iyo taariikhda beddelid of baakadda kasta waa la xiriira iyo asxaabtaada kala soo bixi kartaa version mashruuca in necesiten.Si aanad hubin waxa ay qalab kasta, dul istaagin badhanka oo uu ku tuso waxa aasaaska u ah gudashada xilkooda.
Scripts iyo qalabyada la abuuray waxaa loo adeegsan karaa ArcGIS Pro, iyadoo laga reebayo iyo isbeddelada qaar, maxaa yeelay Pro wuxuu isticmaalaa Phyton 3.5 iyo ArcMap waxay isticmaashaa version 2.7. Qalabka Phyton waxaa laga heli karaa liiska "Analysis".
ESRI horeyba u xaqiijisay in Pro uu beddeli doono ArcMap, waxaa lagu xoojinayaa hagaajinta iyo cusbooneysiinta Pro, tan iyo markii aan ognahay naqshadeynta ArcMap 32 waa gelinno aan macquul ahayn taas soo bandhigo updates weyn, laakiin sidoo kale waxaa laga yaabaa in wada nool in muddo ah, ugu yaraan ilaa 2022 halka aad loo isticmaalaa in mashaariic aad sii shaqeyn karno. mxd ArcMap, .3dd ArcGlobe iyo ArcScene .sxd Pro.
Ku rakibidda ArcGIS Pro
Haddii aad rabto inaad ku rakibto ArcGIS Pro, waa inaad raacdaa talaabooyinkan fudud:
1. Waa inaad sameysid koonto ESRI si aad mar dambe u shaaciso badeecada, waxaad ka heli doontaa foom aad ku bilaabi doonto inaad tijaabiso tijaabadaada tijaabada ee maalmaha 21.
2. Ku qor xisaabtaada Esri iyo dhisida ururkaada, tani waa mid muhiim ah, tan iyo markii aad fureyso codsigaaga emailkaaga iyo macluumaadka la xiriira ESRI.
3. Waxaad raadisaa badhanka si aad u soo daabacdo qaybta tijaabadaada ee Esri, http://my.esri.com, waxay ku habboon tahay Windows 7, 8 iyo 8.1. Fiiri shuruudaha nidaamka si aad si fiican ugu shaqeyn kartid PC-gaaga.
4. Ka dib markii aad rakibayo ah, gasho esri.com, tag liisanka tab Maamul dooro ikhtiyaarka reserved shatiyada, hubi inaad awood u kordhin iyo muujinaysaa Ka dhig.
5. Liisankaaga ayaa la qoondeeyey, hadda waxaad codsan kartaa codsiga.
6. Waxay weydiin doonaan aqoonsigaaga ESRI waana taas! Waa inaad isticmaashaa ArcGIS Pro.
Post Previous«Previous Dhageeysiga maqalka iyo fiidiyowga ee Screencast-o-matic iyo Audacity.
Post Next Skrill - bedelka PaypalNext »